I-khaphu Electric Rubber On emhlabeni - Jomo Technology Co., Ltd
I-khaphu Electric Rubber On umhlaba
Kwakhona sasicinga-malunga enye yeendlela eziphambili ukugcina imimoya esebenzayo kwikhonkco drive. Hayi hoverboard yonke kodwa kuphela ezi hoverboards zombane banayo izitifiketi efanelekileyo nabakholose ukusebenzisa - oku kuquka zonke 10 hoverboards iphezulu kakhulu zidweliswe ngezantsi. Kokuba kunjalo ziyaphuhliswa. Ukuba abachaphazelekayo malunga qethe ukuze bube bicycle kwaye sebenzisa kwi indlela uncedo eliphantsi. Kukho Harleys mini, izithuthuthu zamapolisa, kunye cruisers. Siye waziva apho kwakufuneka kubekho indlela engcono yokufeza ezi iihambo ezimfutshane. Kamva, mhlawumbi, uye ufunde ngcono ngoko kubalulekile. Enoba nje uhambo ukuya ngaselwandle uvavanyo igagasi, intloko ku off-kwindlela ubumdaka, okanye siqhubeke kunye ezixandayo-kumgangatho Velocity nesimbo ujikeleze ebumelwaneni, ukuba kukho Koowheel Electric Rubber afane ngokupheleleyo kuwe, yaye indlela yakho. Iikhonsepthi lwekamva kubonakala kungenakwenzeka kakhulu ukuba onengqondo, kodwa le Rubber zombane iyasebenza yaye yajika zombini kumnandi yaye iluncedo.
Kuba kuhle kakhulu, ngempumelelo-eyakhelwe kwaye mnandi ukuba kuhle kakhulu, ngokufanelekileyo, kwaye kumnandi ukubona! Unako ndikhwele kwi kwimbombo ngamnye kwisixeko sakho. Wena ke onako aphile ngokusebenzisa ezimbombeni ngokulula ntengiso kuphela ukuba kufuneka ndayame phambili okanye emva ukwenzela ukuba bakwazi ukuya phambili okanye unokuyibuyisa. Kukho izinto ezininzi zeenkomo:
1. Le ogqibeleleyo mfutshane Isixhobo uhambo kunye playability eliphezulu.
2. ezincinane, compact, ephathekayo, elula.
3. Lixabiso kodwa ixesha elide.
I Powerboard Self Ukulinganisela Isithuthuthu ukuba wonke. Lixabisekile kakhulu kancinane eyahlukileyo ngokupheleleyo ngomgangatho 'hoverboard' self balancing ngezithuthuthu siza kusetyenziselwa! Okwenzeka professionalrider sokutshaya ivili ngasemva, loo nto yayidla ukucinga nguye phezu isithuthuthu.
Kubalulekile ukuba bagcine of Velocity layo eliphezulu, ubomi bebhetri, ukujongana, iziqhoboshi, incopho, eziyimfuneko yokugcina, kunye iziqinisekiso. Akukho zokumisa ngequbuliso angaba nawe ifu eyingozi phambili. Xa uhlola scooter yombane, skateboards kakhulu ebingaqhelanga kuqala kwi kwirekhodi. Le yenye ivili ezimbini electric self scooter elungeleleneyo .Unga yimani ngxishi phezu kwawo yaye flip 360 isidanga kwi ndawo. Amavili amabini kunye iinjini babini luncedo Velocity kunye nozinzo. Oku kuyinto exhalabisa kakhulu ukwenza, xa wena umntu amavila okanye sidudla ezithile.
ixesha Post: Jan-25-2018